musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » vanhu » Shanya Carlsbad inozivisa Nyowani Chief Executive Officer
Nhau Nhau • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hospitality Industry • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau
Shanyira Carlsbad Inosheedzera Nyowani CEO, Kim Sidoriak
Mubasa rake idzva seMutungamiriri & CEO weKushanya Carlsbad, Kim ari kutarisira kubatana nharaunda pamwe nemabhizimusi emuno kusimudzira zvirinani nekusanganisa iyo Kushanya Carlsbad persona neguta uye nemabhizimusi ega. Iye anoronga kukwidziridza kwaanoenda padanho renyika uye nekuwedzera kuoneka mukati memakiyi akakosha, uku achishandisa ongororo yedata kuita sarudzo dzakadzama pachiyero uye zvinopihwa zvesangano.
Nzvimbo yekushambadzira kwekuenda kweGuta reCarlsbad, California inodoma CEO mutsva.
Kim Sidoriak aive Chief Marketing Officer weSanta Monica Travel & Tourism asati atora Kushanyira Carlsbad.
Shanyira Carlsbad inotarisira kukwidziridza Carlsbad seimwe yenzvimbo dzekutanga dzekushanya muSouthern California.
Shanyira Carlsbad, iyo yekushambadzira musangano weGuta reCarlsbad, yazivisa kugadzwa kweMutungamiri wayo mutsva & CEO, Kim Sidoriak.
Asati ajoina timu Yekushanyira Carlsbad, Kim aive Chief Marketing Officer we Santa Monica Kufamba & Kushanya kwaaive aine chekuita nezano, maitiro uye zvirongwa zvakasimbisa kufarira, kudiwa uye kuzivikanwa kweSanta Monica.
Nekufamba uku, Kim anoshanda ne Shanyira Carlsbad timu uye vanokosha vanokwikwidza kusimudzira Carlsbad seimwe yenzvimbo dzekutanga dzekushanya muSouthern California.
At Santa Monica Kufamba neKushanya, zvakapihwa naKim zvaisanganisira kugadzirisa kwaSanta Monica kwaanoenda chiratidzo chiziviso nekutanga chirongwa chemakore mashanu echirongwa. Iye zvakare ari nhengo yeKushanya California Brand uye Yemukati Komiti uye akawana Certified Destination Management Executive kiredhiti kubva kuDesktop International.
Kutamira kuCarlsbad, kunounza Kim padhuze nemhuri uye Kim anoronga kuve nhengo yenguva refu yenzvimbo yemuno neSan Diego North County nzvimbo. "Ndiri kufara kuve padyo nemhuri, uye ndinotarisira kuve nhengo inoshingairira yenharaunda yeCarlsbad," anodaro Sidoriak, uyo akaitawo basa rekushambadzira kutaurirana kweHilton Hotels Corporation uye Saatchi & Saatchi Advertising.
Mune rake nyowani basa seMutungamiri & CEO we Shanyira Carlsbad, Kim arikutarisira kubatana nenharaunda pamwe nemabhizinesi emuno kusimudzira zvirinani uye kubatanidza Kushanya Carlsbad persona neguta uye neumwe neumwe mabhizinesi. Iye anoronga kukwidziridza kwaanoenda padanho renyika uye nekuwedzera kuoneka mukati memakiyi akakosha, uku achishandisa ongororo yedata kuita sarudzo dzakadzama pachiyero uye zvinopihwa zvesangano.
"Kim anounza musanganiswa wakakwana wezviitiko, kutanga uye hunhu kutungamira kutonga kwesangano riri kuenda muchitsauko chinotevera chekukura," anodaro Troy Wood, Sachigaro weBhodi reKushanyira Carlsbad. "Kuda kwaKim, kutyaira uye kugona kushandira kusimudzira guta kuchabatsira kusimudzira sangano pamwe neguta pamwechete."
Kim akagamuchira Bachelor of Arts in Communications kubva kuYunivhesiti yeSouth California uye chishuwo chake chikuru ari kufamba nyika kuti adzidze nezvetsika dzakasiyana.